Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan-dRaharina amin'i Charles Dassoucy | Michael Jackson miaraka amin'ny fiainana teo aloha ho an'i Jay Leno - Fikambanana vaovao momba ny vatana
Michael Jackson ho sakaizan'ny lasa taloha tany Moliere
Tao amin'ny 2006, nanontaniako i Ahtun Re, ilay fanahy nampitain'i Kevin Ryerson izay nampiseho ny fahaiza-manao ny fiainana taloha, izay manana mari-pahaizana ambony, izay Michael Jackson dia tamin'ny andro taloha. Nisy fahanginana tany amin'ny faran'ny telefaona finday. Ahtun Re dia hoy izy:
"Naman'ny namana Frantsay i Jackson Molière. Raha mikaroka an'i Molière ianao, dia hahita Michael Jackson. "
Molière dia niaina tao amin'ny 1622 ka hatramin'ny 1673 ary nanao ny lahateniny ho an'ny lapam-panjakan'i Louis XIV. Molière, araka ny Wikipedia, dia nanana "sangisangy ho an'ny fanesoana" ary nanjary "iray amin'ireo tompo-tsarimihetsika lehibe indrindra amin'ny literatiora tandrefana."
Hevero fa niaina tany France 400 taona maro lasa izay i Molière. Eritrereto ireo olona an-tapitrisany niaina teto amin'ity tany ity. Tamin'ny fanolorana ahy hitady an'i Michael Jackson ho namana akaiky an'i Molière, dia nanangona ny fanjaitra avy amin'ny ala kely iray i Ahtun Re. Ny fahafahan'i Ahtun Re ny mamerina imbetsaka indray ny lalàm-pinoana vaovao momba ny fanambadiana vaovao izay nahatonga ny olona tsy mahalala fomba dia nahatonga ahy hatoky ny famantarana ny fiainany taloha.
Nandidy roa biografia momba an'i Molière aho. Hitako fa tamin'ny fotoana iray teo amin'ny fiainany dia nandalo an'i Frantsa tamin'ny fiaramanidina renirano i Molière sy ny tarika tranainy. Nandeha an-tongotra teny an-dalana izy ireo ary nanangana tranolay iray, izay niangavian'izy ireo ny fidirana an-tsokosoko mba hanatrehana ny lanonana, izay matetika no mampihomehy. Izany no nahatonga ny mpivady hiaina.
Moliere nihaona tamin'ny Emperora mpanafika | Fiainana taloha ho an'ny Mpanjaka Pop, izay mitaiza amin'ny zatovolahy
Tany amin'ny tanàna iray dia namaky aho fa ilay mpihira iray antsoina hoe Charles Dassoucy dia nanatevin-daharana ny troupan'i Molière. Ao amin'ny biography momba an'i Molière, dia nosoratana manokana fa nandeha i Dassoucy niaraka tamin'ny ankizilahy roa.
Rehefa nandalo ny renirano ny troupo, dia nanampy fotoana i Dassoucy tamin'ny fihirana ho an'ny namany. Tamin'ny fotoana iray, i Dassoucy dia nanolotra ny lohateny hoe "Emperor of Entertainers", tahaka an'i Michael Jackson nantsoina hoe "King of Pop".
Nahita ny sarin'i Charles Dassoucy aho taty aoriana ary nanamarika fa misy fitoviana mahatsikaiky an'i Michael Jackson.
Nandritra ny fivoriana nanaraka an'i Kevin Ryerson, tao amin'ny 2006, Ahtun Re dia nanamafy fa i Michael Jackson no vatana vaovao indray vao herintaonan'i Charles Dassoucy. Tsy nanao ny Dassoucy aho Ny raharaha Jackson tamin'izany fotoana izany, satria tamin'ny fotoana niampangan'i Michael ny fiampangana azy no nanararaotany zazalahy kely tao an-tranony Neverland Ranch.
Ny olona tsirairay dia afaka miditra tsy misy fahatsiarovan-tena amin'ny fiainana taloha mba hamoronana lamina avy amin'ny fiainana taloha, toy ny anaram-boninahitra Jackson of King of Pop, fiovan'ny fiainany taloha izay niantsoany ny tenany ho Emperoran'ny Entertainers. Ity fahafaha-misintona tsy misy fahatsiarovan-tena amin'ny fiainana taloha ity dia aseho amin'ny tranga tranga taloha:
Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Paul Gauguin | Peter Teekamp
Ny fiainam-piainan'i Michael Jackson taloha tamin'ny ady kristianina ho an'ny ankizy
Tsy tamin'ny herintaona na taorian'izay dia naveriko indray ilay raharaha. Tamin'ity indray mitoraka ity, nanatrika fivoriana niaraka tamin'i Kevin aho, nanontany an'i Ahtun Re hoe nahoana i Jackson no nanana an'io fironana io hiaraka amin'ny tovolahy kely roa amin'ny androm-piainany.
Nanazava i Ahtun Re fa ny fiandohan'ity fironana ity dia avy amin'ny fiainana teo aloha, ary i Michael Jackson, fony izy zazalahy, dia niditra tao amin'ny antsoina hoe Crusades an'ny ankizy, izay natao tao amin'ny 1212 AD.
Mandritra ny kroazady, izay niarahan'ny Kristiana avy any Eoropa hiady tamin'ireo Silamo haka an'i Jerosalema amin'ny Ady Masina, rehefa nitsoaka ny zatovolahy mba hiady ny Crusaders, nisy olona iray nanapa-kevitra ny hampiditra tanora ankizilahy hiara-hiady aminy. I Michael Jackson dia iray tamin'ireo tovolahy ireo izay noterena hanompo ary i Michael dia namoy ny ainy tamin'ny naha ankizy azy tamin'ny ady.
Nanazava i Ahtun Re fa ny traikefa ananan'i Michael Jackson amin'ny fahaverezan'ny fiainany amin'ny maha-miaramila ao amin'ny Crusades azy dia niteraka traikefa ara-pihetseham-po izay nanohy ny taona 800. Ny fahaverezany tamin'ny fahazazany nandritra ny ady dia nitarika fanindroany tsy hamerina intsony ny fahazazany indray, izay nitarika ny fananganana ny rantsany Neverland. Ao anatin'izany toe-javatra izany:
"Neverland" dia azo heverina ho "Aza miala amin'ny fahazazana"
Raha ny marina, mety ho ny ankizy sasantsasany izay nipetrahan'i Jackson tany amin'ny toeram-pialan-tsasatra Neverland azy, dia ireo ankizy madinika avy amin'ny Crusades, ankizy izay fantatr'i Michael tamin'iny vanim-potoana lasa iny. Ny fikarohana fanao amin'ny vatana vaovao, anisan'izany ny raharaha taloha momba ny fiainan'i Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny University of Virginia, dia mampiseho fa tafaraka indray izahay amin'ny mpiara-miasa, namana ary olon-tiana tamin'ny taonjato maro. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any amin'ny:
Fifandraisana efa navaozina tamin'ny alalan'ny Reincarnartion
Famokarana zaza sy talenta an-tsokosoko nanazava tamin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Miezaka mamerina mody avy amin'ny fampodiana iray mankany amin'ny iray hafa isika. Ny talenta dia manomboka amin'ny androm-piainany amin'ny iray hafa, izay manazava: Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny zaza amam-behivavy
Michael Jackson dia mpihira malaza sy mpanakanto. Fantatr'izy ireo ny talentany teo aloha izay nahatonga azy ho mpihira, toy ny tamin'ny fiainany toa an'i Charles Dassoucy, Emperoran'ny mpanafika. Ho ahy, ny Charles Dassoucy | Tena mahagaga ny tranga Michael Jackson, satria manampy antsika hahatakatra izany, amin'ny fangorahana, fa maninona no i Michael no fomba.
Reincarnation sy ny fandidiana plastika nataon'i Michael Jackson
Nahoana i Michael Jackson no nanamboatra fandidiana plastika izay nahatonga azy ho toy ny hoe namorona ny dikanteny Caucasiana azy? Mino aho fa izy no nanao izany satria i Jackson dia tsy nanana fanovana maro talohan'ny naha-olona azy tamin'ny razambeny afrikana. Noho izany dia niezaka ny hijery bebe kokoa tahaka ny nataony tamin'ny teo aloha i Michael, fony izy Caucasian.
Reincarnation, Change of Race & Michael Jackson's Opus: Black or White
Ny Daussoucy | Ny raharaha Jackson dia iray amin'ireo tranga fototra izay nahatonga ahy hino ny fahaizan'i Ahtun Re ho afaka hanao lalao miaina ny fiainana taloha. Eritrereto ireo fahasamihafana hitadiavana mpihira iray izay naman'i Molière, izay niantso ny tenany ho Emperora Mpanentra, izay nandeha niaraka tamin'ny ankizilahy kely ary manana ny endriny amin'ny endriny toa an'i Michael Jackson?
Eo am-pamaranana, manantena aho fa i Michael Jackson, eo anelanelan'ny androm-piainany, dia afaka manasitrana ny trauma niainana taloha izay nitranga nandritra ny Crusades. Mpanakanto goavana sy ho ahy izy, ilay hira lehibe indrindra noforoniny Black or White. Ny horonantsary mozika amin'ity hira ity dia mampiseho ny olona mifofotra amin'ny karazana samihafa.
Tena marina tokoa ny fomba fiasan'ny vatana vaovao. Afaka miova ny finoana, ny zom-pirenena, ny firazanana, ny fiaviana ara-poko ary ny lahy sy vavy avy amin'ny andavanandro. Izany fahatakarana izany dia afaka manampy amin'ny fananganana an'izao tontolo izao ho toerana milamina kokoa. Amin'io fomba io, ho ahy, Mainty sy fotsy Ny lova lehibe indrindra an'i Michael Jackson.
Jereo ny an'i Michael Jackson: Black or White
Jay Leno amin'ny maha-teraka tamin'ny maty tao Moliere
Ny tombontsoa, ​​i Moliere dia fantatra amin'izao fotoana izao tahaka ilay mpilalao sarimihetsika Jay Leno, izay naman'i Michael Jackson. Raha ny marina, raha nandalo ny ady ara-pitsarana mifandraika amin'ny fampiantranoan-janany tany amin'ny Neverland Ranch i Jay Leno, dia nijoro ho vavolombelona momba an'i Michael Jackson.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana hita eo amin'i Charles Dassoucy sy Michael Jackson.
Fiainana Taloha: Dassoucy sy Michael Jackson dia mpihira matihanina ary nanome lohateny mitovy aminy izy ireo. Dassoucy dia niantso ny tenany ho Emperora Mpanentana, raha nanambara i Michael fa izy no Mpanjakan'i Pop.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Azo inoana fa ireo ankizy nampiantranoin'i Michael tao amin'ny Neverland Ranch dia miaramila mpiara-belona namoy ny ainy tamin'ny Crusades an'ny ankizy. Ho fanampin'izay, Charles Dassoucy dia nanao dia an-tsehatra niaraka tamin'ny Moliere ary io fifandraisana io dia natomboka indray tamin'ny fisakaizan'i Michael Jackson sy Jay Leno.
Fiovana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-monina: Charles Dassoucy dia Frantsay sy Kaokazy, ary Michael Jackson kosa Afrikana-Amerikana.